Xiriirinta Bulshada iyo Barnaamijkaaga Ganacsiga | Martech Zone
Xiriirka Bulshada iyo Ganacsigaaga
Talaado, September 11, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Haddii aad fursad u heshay inaad dhageysato wareysigayaga Crystal Grave of Duubitaan, waad ogtahay sida aan u qadarino iskuduwayaasha munaasabada. Malaha shaqo adag oo dhanka suuq geynta ah maaddaama suuqleyda dhacdooyinka waaweyni ay si habsami leh uga shaqeeyaan kanaallada sidoo kale ka shaqeeyaan waqtiyada adag iyo fulinta. Fursad labaad kuma helaysid dhacdo - waa inaad si fiican u barataa markii ugu horreysay.
Dhacdooyinku waa hab fiican oo loogula xiriiro macaamiisha mustaqbalka, la-hawlgalayaasha suuq-geynta, shaqaalaha cusub iyo kuwa saamaynta ku leh warshadahaaga. Baro sida loo isticmaalo warbaahinta bulshada si aad uga faa'iideysato ka qeybgalka bandhiggaaga soo socda.
Sawirada Hal abuurka Northwest ayaa isku duba riday xogtan shabakada bulshada iyo ganacsigaaga. Northwest Creative Imaging waxay bixisaa waababyada ganacsiga ugu caansan, bandhigyada ganacsiga, iyo daabacaad weyn oo qaab qiimo jaban ah.